फाइनान्स र विकास बैंकले धेरै कमाएको दिन सात वाणिज्य बैंकसहित १० कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
फाइनान्स र विकास बैंकले धेरै कमाएको दिन सात वाणिज्य बैंकसहित १० कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| १६:५७:३८ मा प्रकाशित
२५ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार शेयरबजारमा १० कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन ७ वाणिज्य बैंकसहित १० कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो । यस दिन नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्स, मेगा, कुमारी, माछापुच्छ्रे बैंक र प्रभु बैंकसहित ११ कम्पनको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बरुण हाइड्रोपावर र रिडि हाइड्रोको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ । यस दिन सबैभन्दा बढि बरुण हाइड्रो र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा खरिद माग आएको छ ।
बरुण हाइड्रोपावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ५ लाख १५ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा ५ लाख १५ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ९७ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग हुँदा शेयरमूल्य ९.८९ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४८९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा बढि रिडि हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ३ लाख २२ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा ३ लाख २२ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ८९ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग आउँदा बिक्री आदेश न्यून हुँदा शेयरमूल्य ९.८९ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४७ रुपैयाँले बढेर प्रतिबित्ता शेयरमूल्य ५२४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा ४ लाख ९० हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा ४ लाख ९० हजार कित्ता खरिद माग आउँदा २ लाख १८ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
आज बैंकको शेयरमा खरिद माग र बिक्री आदेश केही अन्तर रहेकाले बैंकको शेयरमूल्य घटेको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य ११ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ५६१ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस दिन लगानीकर्ता नेपाल बैंकको शेयरमा झुम्मिएका छन् । बैंकको शेयरमा २ लाख ८१ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ८१ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश १ लाख ८८ हजार कित्ता रहेको छ ।
बैंकको शेयरमा खरिद मागको तुलनामा बिक्री केही समान हुँदा शेयरमूल्यमा सामान्य अंकले बढेको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य ४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४५४ रहेको छ ।
मेगा बैंकको शेयरमा २ लाख ६२ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । २ लाख ६२ हजार कित्ता खरिद माग रहेको बैंकको शेयरमा १ लाख ७ हजार बिक्री आदेश रहेको छ । बैंकको शेयर सामान्य अंकले बढेको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकको शेयरमा ३ लाख ५६ हजार, सनराइन बैंकको शेयरमा ४ लाख ८९ हजार, माछापुच्छ्रे बैंकको २ लाख ८१ हजार र नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्सको २ लाख ६२ कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ५५ मिनेट पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न १५ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु २२ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? ३१ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते ३९ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ४४ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ५२ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ५३ मिनेट पहिले
सीईडीबी हाइड्रोपावरको सर्किट लेबलमा कारोबार, शेयरखरिदकर्ता कति ? ५ दिन पहिले
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनपरी मूल्य ४ हप्ता पहिले
वर्तमान संविधानले राष्ट्रियताको भावना कति बढायो ? २ वर्ष पहिले
स्टेजमै ढुंगामुढा प्रहार भएपछि अर्थमन्त्री बोल्दाबोल्दै हिडे ४ महिना पहिले
अब अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको जाँच पास भीएफटीसीबाट ८ महिना पहिले